SIDEE LOO SAMEEYAA JILBAHA GACMAHAAGA SI AAD U BIXISO IYO BEERTA? - DHISMAYAASHA
Qofka caajiska ah ee cawska ee beeraha iyo beeraha ee dalkeenna aan la dabooli karin. Waxay ku saabsan tahay ciriiri!
Fudud oo ah qarniyo qarniyo badan ayaa ilaaliyey dalaggii geerida. Oo haatan illoobo, oo aan micne lahayn.
Laga yaabee in jeexjeexintu aysan ahayn mid waxtar leh oo ka ilaalisa xayawaanka yaryar ama shimbiraha. Si kastaba ha ahaatee, qaybta heesaha ayaa aan la joojin.
Haddii shimbiruhu ay soo dhaweeyeen marti-galiyayaasheena, dad badan ayaa jecel inay heestaan, u ogolaadaan inay joogaan. Laakiin sababta aadan u samayn beertaada xitaa mid aad u firfircoon oo soo jiidasho leh? Xusuusi carruurnimada? Geli dhirbaaxada!
Haddii aadan ku tiirsaneyn beerta ee erayada gastronomic, ku farxi farxad. Haddii aad ku tiirsan tahay, mareegtu waxay kaa caawinaysaa ilaalinta dalagga, haddii aad barato sida loo isticmaalo si haboon.
Ninka cagaaran wuxuu u muuqdaa mid qurux badan oo ku yaal jardiinooyinka ornamental, jardiinooyinka taranka waddanka ee meelaha lagu ciyaaro dalka. Waxay soo jiidataa dareenka dadka kale waxayna siisaa dareeno qiiro leh.
Waa maxay sababta xayawaanka loo beeray
Faaruqin beerta loo isticmaalo wakhti dheer. Waxaa la rumeysan yahay in ay ka cabsiin karto shimbiraha dhibsado qorraxda, geedo waaweyn iyo geedo. Waxyaabaha kale, mareegta ayaa u muuqata mid madadaalo leh oo farxiya dadka kale.
Bilowga, waxaa habboon in la fahmo sababta ay shimbiraha uga cabsanayaan xayawaanka cufan leh. Isla markiiba waxaanu xusuusneynaa in aan jilbaha oo dhan cabsi galin.
Si aad u hesho saameynta ugu sareysa, calooshaadaagu waa inuu ahaadaa mid u dhow qofka sida ugu macquulsan. Xaaladdan, fiiro gaar ah waa in la siiyaa cabbirka - waa inay ahaataa mid weyn.
Ha ilaawin midabada dhalaalaya, waxay sidoo kale cabsi gelinayaan shimbiraha.
Sidaa daraadeed, cabirku wuxuu cabsi galinayaa, midabada dhalaalaya waxay samaysaa dareeraha la ogaan karo, isku midka ah qofka ayaa sidoo kale sheegaya in khatarta ku dhow yahay.
Wuxuu ciyaaraa door muhiim ah iyo hoy. Waxaa ugu fiican in sheyga si sax ah loogu shubo duurka. Haddii ay ku yaalaan qaybo kala duwan oo beerta ah, markaa waxaa haboon in la dhigo tirooyin dhowr ah.
Maaweelada iyo aphids, akhriso on site, waa maxay xiriirka u dhexeeya iyaga.
Halkan fiiri daawada ugu fiican ee wireworm ee beertaada.
Hababka la dagaallanka baradho-baradho Colorado: //rusfermer.net/ogorod/vrediteli-ogorod/borba/naleteli-na-kartoshku-koloradskie-zhuki-metody-borby-s-koloradskim-zhukom.html
Qalabka loo baahan yahay cirifka
Maaddooyinka loo abuuro masaafo baahi badan uma baahna: dhar jireed iyo midab alwaax ah. Qalabka lafaha, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo qoryo alwaax ah, taas oo gacmaha iyo madaxa loo gooyey.
Qalqalka qalloocaa dhulka, halka ay lagama maarmaan tahay in la hubiyo in shaxanka uu yahay mid xasilloon si uusan hoos ugu dhici doonin gustsada dabaysha. Ka dibna shaati jir iyo surwaal ayaa lagu dhejiyaa qalfoofka. Madaxa - koofiyad, baaldi, kerchief ama dheriga.
Wejiga khatarta ah waxaa laga samayn karaa alaabta wax lagu duubo: indhaha - badhida, dibnaha iyo afka - xargaha shukumaan, ama barbaro.
Haddii aadan jecleyn muuqaalka xayawaanka cufan ee dharka gaboobay, waxaad cunugaaga qaadan kartaa waxyaabo. Xaaladdan, sawirka wuxuu noqon doonaa mid xiiso leh oo wanaagsan.
Waxaa lagama maarmaan ah in aad daryeesho maaddada oo aad buuxin doonto cirridka. Waxay noqon kartaa caws ama qufac sharaab leh. Waxyaabaha kale, waxaa lagaa rabaa inaad xirto xarig, dhejis, silsilado, irbadaha iyo biinanka, qalimaanta dareemaha.
Haddii aysan jirin wax rabitaan ah in ay sameeyaan wax jajab ah oo ay u gaar ah, bogsiyada diyaar u ah oo ka yimid alaabooyin kala duwan ayaa lagu iibiyaa dukaamada beeralayda. Laakiin waxaa loo yaqaan si duwan - beerta beerta.
Dacha waxaad ku dhisi kartaa maqaasiinka wanaagsan leh gacmahaaga.
Wax dheeraad ah ka baro sida loo sameeyo sigaarcabada gacmahaaga adoo iskuxirta: http://rusfermer.net/postrojki/hozyajstvennye-postrojki/vspomogatelnye-ororuzheniya/domashnyaya-koptilnya-svoimi-rukami.html
Samee ciriiriga ugu fudud suurtagal ah dhowr daqiiqo gudahood. Marka hore, tiri qadar dheer.
Xakamaynta waxaa lagu qaylinayaa meel fog oo ah 1/3 oo ka socota dhererka, wax la mid ah iskutallaabta waa inay soo baxaan. Tani waxay noqon doontaa qaabka. Ka dibna u daadi garee saamiga dhulka sida qotada dheer.
Markaas waxaad sii wadi kartaa daqiiqada ugu fiican - qurxinta. Waxaad u baahan doontaa wax kasta oo xun, oo ka bilaabma surwaal jir ah ilaa cadka caadiga ah.
Aynu bilowno lugaha. Waxaan raadineynaa surwaaladii ugu da 'weynaa. Dhibaatada ay u muuqdaan, waxa soo jiidashada badan ee jilicsan ayaa soo bixi doona. Qeybta hoose ee santuuqyada ayaa qoryay ama sewn. Tani waa lagama maarmaan si ay walaxda aan ula macaamili doono jahwareerku ma dhicin. Sida caadiga ah, caws ama caws ayaa loo isticmaalaa tan. Haddii aad ku nooshahay magaalada oo aadan garanayn meesha aad ka heli karto hay, waxaad buuxin kartaa surwaalkaaga xumbo badan ama xayawaan kale.
Helitaanka taayirada. Si aad u sameyso dhar-xidid waxay u baahan doontaa shaati. Waxaa la gashanayaa surwaal iyo cufan leh caanaha si loo naaseeyo. Shaatiyada leh surwaalyada ku xiran biinanka.
Waxaan sameynaa madaxa iyo gacmaha. Fursada ugu fudud ee lagu sameeyo madaxa iyo gacmaha waqti isku mid ah - nacon pantyhose. Waxay yihiin pre-cufan leh hay. Ka dibna xir qaybta sare ee tilmaanta si kubada loo sameeyo. Qalabka guryaha gacmaha lagu riixo ayaa lagu riixaa shaati-gacmeedka. Waa hagaag, waa in la hagaajiyo madaxa, waa lagama maarmaan in ay ka soo baxdo shaararka ee shaatigeeda.
Sidee loo sameeyaa cagaha? Waxay qaadan doontaa kabo gaboobay. Waxaad qaadan kartaa dharka, kabaha, kabaha. Markii hore, waa inay sidoo kale buuxiyaan cagaarka si ay u sameeyaan qaab. Ka dib marka cagaha la xiro, waxay ku xiran yihiin xagga hoose ee lugta leh biinanka ama isticmaalka xabagta dhismaha.
Haddii aad rabto in jeexjeexku u ekaado sida ugu dhow ee suurtagal ah qof, waxaad samayn kartaa gacmo. Si aad tan u samayso, u qaad gacmo gashi, ku rid cagaar iyo dhajis.
Diyaargarowgii ugu dambeeyay: Waxaan bac ku shubeynaa madaxa waxaanna waji doonaa wejiga. Ciribku kuma dhaqaaqi doono, haddii qiyaasta qoorta ku xiran tahay mid ku xiran xarig. Qofku wuxuu noqon karaa mid kasta, waxay ku xiran tahay awooddaada iyo maskaxdaada. Sawirka dhameeyay ayaa soo bixi doona haddii aad gashato koofiyad, dabool, dheriga madaxaaga. Waxyaabaha kale, waxaad ku qurxin kartaa cirfashka leh waraaqo rujin ah, maryo, dawanno. Sidaas awgeed maaha kaliya uun isha, laakiin sidoo kale waxay sameeyaan dhawaaqyo.
Astaamaha canabku waxay ka heli doonaan maqaalka boggayaga internetka.
Jiiska miiska ugu wanaagsan: http://rusfermer.net/sad/vinogradnik/sorta-vinograda/stolovye-sorta-guograda.html
Taas oo dhan, waxay ku xiran tahay inay ku dhejiso xakamaynta dhammaadka iskutallaabta. Sidee loo sameeyaa tan? Waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo qalabka dhismaha.
Lugaha, gacmaha iyo gadaashaha qoorta ayaa lagu beegsanayaa qaybta hoose. Feetka ayaa dabooli kara dabaysha, sidaa darteed waxaad ku ridi kartaa wax culus ama iyaga oo sameeya qaab fiilo bir ah.
Sidaas aynu soo koobno ​​kor ku xusan. Si aad u sameyso beertii beerta adoo adeegsanaya awoodda qof kasta. Tani ma aha oo kaliya faa'iido leh, laakiin sidoo kale aad u xiiso badan, kuu oggolaanaya in aad iska dhigto kartidaada hal abuurka ah. Xitaa haddii aadan raacin ujeedo wax ku ool ah, miyir beelku wuxuu noqon karaa naqshadeeye "caddayn" beertaada.
Raadi qalab si aad u sameysid jajabyo ma aha mid adag, isla mar ahaantaasna ka takhalus qashinka xad-dhaafka ah. I rumee, ma jirto wax ka fiican wax wax gacanta lagu sameeyey. Iyo haddii aad jeclaan lahayd, waxaad abuuri kartaa oo ku dhejin kartaa qaar ka mid ah tirooyin xiiso leh beerta!